Rochas chọrọ ịchị ugboro atọ site na ime ka ọgọ ya nwoke nọchie ya-Onyeagọcha – hoo!haa!!
Otu onye ọnụ na eru n’okwu n’otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC ma bụrụkwa onye gabụrụ Ụlọ Nzụkọ Omebeiwu Naịjiriya nke nta, Ọkaiwu Uche Onyeagọcha eboola Gọvanọ Rochas Okorọcha ebubo ịchọ ịchị Imo Steeti ugboro atọ site na itinye ọgọ ya nwoke ma bụrụkwa onowu ya dịka Gọvanọ n’afọ 2019.
Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme e jiri merube Ụbọchị Nnwereonwe nke Ndi nta akụkọ n’ogige ndi NUJ, Owere, o boro Gọvanọ Okorọcha ebubo izo n’okpuru ọgọ ya nwoke bụ Uche Nwosu were chọọ ịchị ugboro atọ.
Onyeagọcha kọwara na Rochas ehiwela otu achụmnta nkwado a kpọrọ “Ugwumba Movement” iji were mezuo atụmatụ a.
Onyeagocha sịkwara: “Uche Nwosu bụ ọgọ ya nwoke enweghị ike ịrọ nrọ ịbụ Gọvanọ Imo Steeti”.
O nyekwara Okorọcha ndụmọdụ ka ọ gbadoo anya n’ọkwa onyeisiala nke ọ na-azọ ma ritukwaa dịka Gọvanọ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọgọ ya nwoke nọchie ya.
Mana n’egbughi oge, Kọmishona Imo Steeti na-ahụ maka Mgbasa Ozi nakwa Atụmataụ bụ Injinịa Obinna Nshirim katọrọ ihe ọ kpọrọ okwu na emebi ihe Onyeagọcha kwuru kwugide Gọvanọ, ma kwukwaa na onye na arọ okwa Gọvanọ Imo Steeti anya ekwesịghị ị na-adị ka onye arịrịọ.
Gụkwụo Anyị nile bụ ndi bịafra n’ime mmụọ anyị-Obi Ọnịcha
Ka osina di, okwu a atụghị ndi mara Ọkaiwu Onyeagọcha nke ọma n’anya, ebe ha maara ya dịka ọkaiwu anya na enwu ọkụ nakwa onye na-alụ ọgụ maka ikike dịịrị mmadụ, tinyekwara na ọ bụ onye na anaghị achọ ihụ ebe ana emegbu onye ọbụla, site na mgbe ọ nọ na mahadum UNIPORT.
Tupu ugbua, akụkọ na -arị ibe ya elu banyere atụmatụ asị na Gọvanọ Okorọcha ji iji mee ka ọgọ ya nwoke nochie ya n’oche dịka Gọvanọ Imo Steeti. Site n’ozi e nwetara n’aka otu onye mara nke ekwe na-akụ, adọbatala Sinetọ Ifeanyi Ararume na ya bụ atụmatụ site na ịgwa ya ka o weta otu nwa ya nwoke ka ọ bụrụ osote ọgọ Okorọcha na ya bụ nhọpụta.
N’ezie, ọ bụrụ na nkea emee, ndi Mpaghara Owere ga abụzị ndi agbaghapụrụ agbaghapụ. Onye ikpeazụ onye si mpaghara Owere bụ Gọvanọ Imo Steeti bụ Sinetọ ịvan Enwerem n’afọ 1992!
Previous Post: Ndigbo bụ ndi mbụ bịara Ile-Ife-Obi Ọnịcha
Next Post: Haiti – Vertières : «Asachiela otu usoro n’akụkọ mba ala a. Eferela n’usoro ọhụrụ» Jovenel Moïse